Faahfaahin:Qarax lagu dilay taliyihii NISA ee Dhuusamareeb | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Faahfaahin:Qarax lagu dilay taliyihii NISA ee Dhuusamareeb
Faahfaahin:Qarax lagu dilay taliyihii NISA ee Dhuusamareeb
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in qarax maanta lagu dilay taliyihii ciidamada Nabad sugidda NISA ee Dhuusamareeb, Cabdirashiid Cabdi Nuur Shiikhdoon (Qooje-Yare ) iyo Askar ilaalo u ahayd.
Qaraxa ayaa oo ahaa miinada nuuca dhulka la galiyo ayaa waxaa lala eegtay talyaha iyo ilaaladiisa xilli ay safar uga soo baxeen magaalada Dhuusamareeb, iyadoo uu qaraxa lala eegtay xilli ay marayeen deegaanka Ceeldheere oo 30-KM u jira Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay mas’uuliyadda qaraxan, iyagoona sheegtay in ay dileem 14 ruux oo uu kamid yahay talyihii nabad sugidda ee Dhuusamareeb.
Saraakiisha ciidamada ayaan weli ka hadlin qaraxan lagu dilay talyihii Nabad Sugidda ee magaalada Dhuusamareeb.
Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay culeys dhinaca amaanka ah saaray Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyaga oo Hoobiyayaal ku garaacayay.
Previous articlePuntland oo sheegtay in caawa wixii ka dambeeya ay MD Farmaajo oo aqoonsan doonta madaxweynihii hore
Next articleDHAGEYSO:Dab ka kacay dabaq ku yaala Wajeer